Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka oo xaflad soo dhaweyn ah loogu sameeyey Londoni – Gedo Times
class="post-template-default single single-post postid-52601 single-format-standard">
Muuqaal:Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Kulan La Qaatay Wakiilllada Beesha Caalamka
Daawo:Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Oo Guddoomiyay Shir looga Hadlay Hagaajinta Qaab-dhismeedka Isku-dubba-ridka Gargaarka
Sawiro:Madaxwayne Farmaajo oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb
Minneapolis:Munaasibad Lagu Taageerayo Guddoomiyaha Cusub ee Gobolka Banaadir
Wasaarada Caafiamadka oo Muqdisho ku qabatay dood ku saabsan Tubta Qaran ee Caafimaadka loo dhan yahay
Home / Wararka Maanta / Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka oo xaflad soo dhaweyn ah loogu sameeyey Londoni
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka oo xaflad soo dhaweyn ah loogu sameeyey Londoni
Munaasabadda Soo dhaweynta ah oo ay soo qaban qaabiyeen Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka UK ayaa loo sameeyey masuuliyiin uu hor kacayey Ra”iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo ay kamid ahaayeen Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji iyo guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho mudane Eng: C/raxmaan Cumar Cismaan.
Madaxda Jaaliyadda ayaa ugu horeyn munaasabadda ka sheegay iney diyaar u yihiin garab istaagga dowladda Soomaaliyeed oo horumar ka sameysay dhinacyo badan, iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay suugaan kala duwan oo madaxda lagu soo dhaweynayey.
Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya mar waliba ay u baahantahay taageerada shacabka oo ay kamid yihiin qurba joogta, waxaana uu tilmaamay in dadka qurbaha ku nool looga baahanyahay iney qaataan masuuliyad gaar ah oo ay kaga qeyb qaadanayaan horumarka Dalka.
“waajib ayaa idinka saaran inaad ka qeyb qaadataan horumarka dalka, oo si gaar ah aad ula shaqeysaan dowladiina oo ku guuleysatay in horumar badan ay sameyso”ayuu yiri Wasiirka Cadaaladda.
Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane C/raxmaan Cumar Cismaan ayaa halkaasi ka sheegay in ka maamul ahaan ay dadaal badan ku bixiyeen sidii loo hormarin lahaa Caasimadda, si ay ula tartanto caasimadaha dunida, islamarkaana ay ka shaqeeyeen sidii xal waara loogu heli lahaa barakacayaasha ku nool gudaha iyo duuleedka Muqdisho.
“12-kii bilood ee aan masuuliyadda heynay waxaan ka shaqeynay sidii aan xal ugu heli laheyn barakacayaasha, waxaan horumar badan ka sameynay amniga, bilicda iyo guud ahaan horumarka caasimadda”ayuu yiri Eng: Yariisow.
Ra”iisul Wasaare ku xigeenka Dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa munaasabadda ka sheegay in Dowladda Soomaaliya ay horumar balaaran ka sameysay dhinacyada Amniga, Cadaaladda, Dhaqaalaha iyo ka hortagga Musuqa, waxaana uu tilmaamay in waajib ay tahay si horumarkaasi loo ilaaliyo in la garab istaago dowladda Soomaaliya.
“Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu soo dhisay Wasiiro farsamo yaqaano ah oo garanaya waxa ay qabanayaan iyo waajibaadka ka saaran dadkooda, kuwaas oo aan dano gaar ah laheyn balse jecel in si sax ah ay ugu adeegaan shacabkooda Soomaaliyeed”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka.
← Previous Story ONLF Oo Hub kadhigis lagu sameeyey
Next Story → Bosaaso oo noqotay magalada labaad ee ugu amaanka xun iyo Howgal kasocda